Shiinaha Mobile Germ-dilka Robotyada PulseIn-D Soo-saar iyo Warshad | Doneax
Jeermiska-dila Robotyada PulseIn-D
1) Pulsestrike 360 ​​iftiinka xenon
2) Kumanaan jeer oo ka badan laambad-dhaqameedka meerkuriga B2ltraviolet, oo daboolaya dhammaystirka jeermiska dhalmada (200-315nm)
3) Wax ku ool ah, bey’ada u saaxiib ah, dhakhso badan (kaliya 5 daqiiqo)
4) Radius jeermiska ayaa gaari kara 3 mitir, isagoo dilaya superbugs sida CRE, VRE iyo MRSA daqiiqado gudahood.
5) Waxyeello soo gaadhin qalabka iyo aaladaha uu keeno nalka qabow, diyaarna u ah in la isticmaalo
6) Waa mid aad halis ugu ah cudurada keena. Cudur-jire ma leh difaac u ah iftiinka garaacaya
Waxaan Ubaahanahay Qiimo
Halbeegyada Farsamada ee Garaaca Wadnaha Ultraviolet Sterilizer
(Robotka jeermiska lagu dilo) PulseIn-D
1 Garaaca wadnaha xenon
1.1 Tuubada laambada xenon lagu dhejiyay waxay soo saartaa iftiin culus
1.2 Dhererka qaansada iftiiminta-≥ 37.5 cm
1.3 Farqiga korantada ≥ 3.5 cm
1.4 Soo noqnoqodka iftiinka ≥ 2 Hz; danab guud ahaan korantada ≥ 3000V
1.5 Laydhka garaaca wadnaha nolosha ino 3 milyan jeer
2 Kaydiyaha danab sare
2.1 Bixinta iyo soo deynta waqtiyada ≥ 50 milyan oo jeer
2.2 Nidaamku wuxuu si otomaatig ah u ogaadaa xaaladda awoodda kapasitoorku wuxuu si otomaatig ah kuu xusuusinayaa inaad beddesho kaabista kaarka dheecaanka dhacay
3 Awooda nidaamka
3.1 Danab galinta: 220V / 50HZ
3.2 Awood gelinta ≥1200W
4 Cudurka jeermiska dila
1 4.1 Cunsurka jeermiska ayaa ah nalka buuxa ee garaaca wadnaha oo qabow oo ay kujiraan iftiinka ultraviolet ee kooxda 200nm-315nm
▲ 4.2 Tamarta laydhka 'ultraviolet light pulsed' oo leh dherer dhererkiisu yahay 250nm-280nm waa inuu noqdaa> 62000uw / ​​cm2 1 mitir (warbixinta tijaabada waa la bixiyay)
5 Saamaynta jeermiska (keen warbixinta warbixinta)
5.1 Qiyaasta dilka ee MRSA dusha shayga 3 mitir kadib 5 daqiiqo ee irradiation waa .9 99.9%
5.2 Heerka dilka bakteeriyada dabiiciga ah dusha sare ee mitirka 3 kadib 5 daqiiqo oo shucaac ah ≥ 99.0%
5.3 Heerka dilka ee Acinetobacter baumannii ≥ 99.9% at 3 mitir ka dib markii la shubay 5 daqiiqo
6 Waqtiga jeermiska la dilo
6.1 Waqtiga jeermiska lagu dilo waxaa la dejin karaa 5 daqiiqo, radius jeermiska waa is 3 mitir, kaas oo loo dejiyay iyadoo loo eegayo sheyga jeermiska lagu dilaayo iyo cabirka qolka.
7. Qaybta qaadista laambada caqliga badan
.1 7.1 Nalku si otomaatig ah ayuu u kici doonaa oo u dhici doonaa iyadoo loo raacayo tilmaamaha nidaamka iyo heerka shaqada, dhererka shaqaduna waa ≥165cm.
7.2 Nolosha nalka is-tijaabinta, nidaamku wuxuu si otomaatig ah u xasuusiyaa inuu beddelo laambaddii dhacday
7.3 Dibedda tuubada laambaddu waxay korsataa muraayad quartz-permeability sare ah, jeermiska-permeability sare iyo iftiinka jeermiska dhalmada, gooyay 200NM
Iftiinka soo socda ayaa loo gudbiyaa si looga fogaado jiilka ozone ee ka fog tuubada laambada.
▲ 7.4 Miiraha aaladda ozone iyo shabaqa kala-baxa ayaa lagu rakibay dusha sare ee tuubada laambadda si ay u jajabaan oo u shaandheeyaan ozone-ka laga soo saaray aagga u dhow tuubada laambadda; fiirsashada ozone ka dib jeermiska iyo jeermiska la isaga dilo waa <0.08mg / m³ (warbixinta tijaabada ayaa la bixiyay)
8. Dusha sare ee muraayada la soo dhoofiyo waxaa loo sameeyaa dusha sare oo ka tarjumaya caaryada si loo kordhiyo tamarta iftiinka banaanka u baxa isla markaana kordho
Dheeraad ah saameynta jeermiska
9. Nidaamku wuxuu diyaar u yahay inuu isticmaalo: isagoo isticmaalaya garaaca wadnaha si uu u soo saaro iftiin qabow oo xoog leh, oo aan waxyeello u geysan qalabka nuuraya, caag bir ah, daahyada darbiga iyo deegaanno kale.
10. 7 inch shaashadda taabashada capacitive smart
10.1 softiweerka shaashadda taabashada wuxuu leeyahay howsha xusuusinta dhammaystirka jeermiska, kor u qaadista laambadda, hoos u dhigta laambadda, billow biligleynaya, joojinta biligleynta, nidaamka dejinta, dejinta cabbirka, iwm.
10.2 Software-ka shaashadda taabashada wuxuu leeyahay howl maareyn caqli-gal ah, oo si otomaatig ah u duubaya xogta ku habboon ee jeermis kasta
Nidaamku wuxuu si otomaatig ah u ururiyaa xogta qayb kasta oo nidaamka ka mid ah wuxuuna leeyahay shaqo digniin toos ah.
10.3 7-inji kumbuyuutar oo fidsan oo fidsan wuxuu leeyahay shaqooyin la mid ah shaashadda taabashada martida;
11. Qaylada mashiinka oo dhan ≤ 65DB
12. Miisaanka saafiga ah ee mishiinku waa 65KG, baakaduna waa 100KG.
13. Soo saaruhu wuxuu ka gudbay shahaadada ISO9001
. 14. Habka wax soo saarka ayaa maray shahaadada CE; sheygu wuxuu leeyahay shahaado patent ah; badeecada ayaa dhaaftay warbixinta cusub ee raadinta.
15. Gudaha> 10 cosbitaal oo ka sareeya Fasalka III ayaa rakibay awood.
16. Cabbirka Mashiinka: 55cm ballaaran, 72cm dheer, 115cm sare;
17. Muddada damaanad qaadka martida iyo tubbada laambada xenon: 12 bilood.
Taxanaha 'PulseIn-D' ee faleebada loo yaqaan 'xenon UV sterilizer' (jeermiska jeermiska dila) ayaa soo saaray iftiin xoog leh oo xoog leh (oo ay ku jiraan nalka buuxa ee ultraviolet, gaar ahaan 200nm-320nm) iyada oo loo marayo laambadaha xenon ee bey'adda u fiican, oo badiyaa dhaafayo baaxad ballaaran, tamar sare pulsed ultraviolet light Irradiation wuxuu baabi'iyaa DNA-da microbial ama RNA si loo baabi'iyo microbes ama dib u soo nooleynta microbial, si loo gaaro jeermis dhaqso leh oo hufan ee fayrasyada, fungi, bakteeriyada, kudka iyo jeermisyada kale. Wax soo saarku wuxuu bixiyaa hab nadiif ah oo dhakhso ah oo hufan oo nadiif ah iyo habka daaweynta jeermiska, taas oo si weyn u yareyn karta culeyska jeermiska ee deegaanka hay'adaha caafimaadka iyo caafimaadka isla markaana yareyn kara heerka infekshinka isbitaalka (HAIs) ee hay'adaha caafimaadka iyo caafimaadka.
Isticmaalka ugu weyn
Qalabka xenon UV ee jeermiska loo yaqaan (germicidal robots) ee ay soo saarto shirkaddeenu wuxuu si weyn u yareyn karaa culeyska microbial ee deegaanka hay'adaha caafimaadka iyo caafimaadka isagoo si dhaqso leh u dilaya cudur-sidayaasha sida fayrasyada, fungi, bakteeriyada, iyo isboorti. Waxaa si ballaaran loogu adeegsan karaa hay'adaha caafimaadka heerar kasta. Waxay si wax ku ool ah u yareyn kartaa heerka infekshinka isbitaalka (HAIs) ee hay'adaha caafimaadka heerar kasta oo dhan iyadoo jeermis looga dhigayo jeermis dilaaca iyo jeermiska dusha sare ee walxaha iyo hawada.
Saamaynta jeermiska ee alaabooyinka
Saamaynta bakteeriyada ee la caddeeyey ayaa lagu muujiyey jadwalka soo socda:
Staphylococcus aureus (MRSA) oo u adkeysata Methicillin
Vancomycin enterococci u adkaysta (VRE)
Nalalka xenon ee jilicsan 1. Tuubada laambada xenon lagu dhejiyay waxay soo saartaa iftiin xoog leh 2. Dhererka qaansada qafiifka ah ee soo-baxa iftiinka ≥ 37.5 cm 3. Kala dheereynta korantada ≥ 3.5 cm 4. Soo noqnoqda iftiinka ≥ 2 Hz; danab guud ahaan korantada ≥ 3000V 5. Laydhka garaaca nolosha nolosha ≥ 3 milyan oo jeer
Kaydiyaha dareeraha sare ee korantada 1 .Xilliyada culus iyo sii deynta ≥ 50 milyan oo jeer 2. Nidaamku wuxuu si otomaatig ah u ogaadaa xaalada capacitor-ka soo deynta wuxuuna si otomaatig ah kuu xasuusinayaa inaad bedesho kaabista kaarka dheecaanka dhacay.
Awoodda nidaamka 1.Kuleylka gelinta: 220V / 50HZ 2.Waaxda gelinta ≥1200W
Cunsurka jeermiska 1. Cudurka jeermiska lagu dilaa waa nalka buuxa ee wadnaha garaaca wadnaha, oo ay kujirto laydhka ultraviolet ee 200nm-315nm band 2. Tamarta falaadhaha shucaaca leh ee dhererka dhererkoodu yahay 250nm-280nm waa inay ahaadaan> 62000uw / ​​cm2 at 1 mitir (warbixinta tijaabada ee la bixiyay) Saamaynta jeermiska (keen warbixinta warbixinta) Qiyaasta dilka bakteeriyada dabiiciga ah dusha sare ee 3 mitir 5 daqiiqo kadib markii ay shidan tahay ≥ 99.0%
7 inch shaashadda taabashada capacitive smart
Soo-saaraha ayaa ka gudbay shahaadada ISO9001
Habka wax soo saarka ayaa ka gudbay shahaadada CE; sheygu wuxuu leeyahay shahaado patent ah; badeecada ayaa dhaaftay warbixinta cusub ee raadinta.
Noocyada iyo faa'iidooyinka
1. jeermis dhaqso ah: Habka jeermiska dhaqso loogu dilo meel gaar ah wuxuu dili karaa Ebola, C.diff, MRSA, CRE iyo virus kale iyo bakteeriyada iska caabinta
2. Waxtarka shaqada ee sarreeya: 5 daqiiqo ayaa dhammayn kara hawsha jeermiska ee 25 m²; 30 daqiiqo ayaa xalin kara 150 m²;
3. Hawlgal fudud: looma baahna qalliin xirfadeed, kalkaaliyayaal caafimaad, kalkaaliyayaal caafimaad iyo shaqaalaha nadaafadda ayaa ka shaqeyn kara tababarka ka dib si ay u dhammaystiraan dilka;
4. Waxyeellooyin ma leh: ma nijaasoobayso, haraaga kiimikada;
5. Waxyeello malaha: Teknolojiyada iftiinka qabow waxaa loo isticmaalaa in aan lagu dhaawicin waxqabadka iyo dusha qalabka caafimaadka; mishiinka-mashiinka ayaa la kala saaraa inta la isticmaalayo, iyo wireless-ka lagu hago waxaa loo isticmaalaa in looga fogaado waxyeelo jirka aadanaha;
6. Habboonaanta: diyaar u ah in la isticmaalo, jeermiska lagu dilo waqti kasta.
55cm ballaaran, 72cm dheer, sare 115cm
Muddada damaanad qaadka martida iyo tuubada laambada xenon
Waqtiga jeermiga lagu dilo
waxaa loo dejin karaa 5 daqiiqo, radius jeermiskuna waa meters 3 mitir, kaas oo loo dejiyay iyadoo loo eegayo shayga
jeermiska lagu dilo iyo cabirka qolka
Jaantuska xannibaadda nidaamka
Markay qalabku ku dhaqaaqayo diyaaradda, isku day inaad riixdo qalabka oo aadan jiidaan qalabka, sida ku cad sawirka hoose:
dhaqdhaqaaqa baadi Jaantus
dhaqdhaqaaqa saxda ah
Qalabku wuxuu ku socdaa diyaarad. Markuu jiro jeexdin weyn ama soo bax, waa in horay loogu sii dhaqaajiyaa marinka lugta, si qalabku uga soo gudbo jeexitaanka, gacankana si adag looma jiidi karo. Sida hoos ka muuqata:
dhaqdhaqaaqa baadi jeexdin
dhaqdhaqaaqa saxda ah ee jeexdin
Markay qalabku marayaan jiirada, waa in la ogaadaa marka qalabka la dhaqaajinayo, waa inaad istaagtaa aaladda horteeda oo aad jiido aaladda korkeeda, xagal qallooca aaladuna kama badnaan karo 30 darajo. Sida hoos ka muuqata:
Feejignaan: Xusuusnow! Ha ku riixin qalabka gadaashiisa markaad fuushaneyso!
Markii qalabku ka gudbo jaranjarada kore iyo tan hoose, dad badan ayaa looga baahan yahay inay qalabka kor u qaadaan, waana mamnuuc in xoog lagu jiido qalabka kor tallaabada, sida hoos ka muuqata:
Isdhexgalka habka shucaaca
Hore: AI Germ-dilka Robots AIStrike
Xiga: Mashiinka Nadiifiya Hawada Hawada ee AirH-Y600H
Ai Jeermiska Robot-ka
Mashiinka jeermiska lagu dilo ee loogu talagalay Isbitaalka
Caafimaadka Qalabka Isbitaalka
Qalabka Isbitaalka ee Dhalmada
Dhalmada Isbitaalka Uv tarooli
Cudurka Nadaafadda Bacriminta ee Isbitaalka
Isbitaal Uv Sterilizer
Robotka Jeermiska Jeermiska
Sterilizer Uvc La qaadan karo
Nadiifiyaha Nadiifinta Neefta
Pulsed Ultraviolet Jeermiska Robot
Pulsed Xenon Uv Siraaj
Pulsed Xenon Uv Robotyada
Nidaamka Xenon Uv Pulsed
Pulsed Xenon Uvd Robotyada
Sunta Robotka ee Dugsiga
Mashiinka Bacriminta ee Isbitaalka
Robotka Jeermiska Ultraviolet
Mashiinka Bacriminta Ultraviolet
Siraha Uv Disinfection For Hospital
Robotka Siraha Sunta Uv
Robotka Jeermiska Uv
Uv Light Jeermiska Robot-ka
Isbitaalka Madhalays ka dhigida Uv
Robotka Jeermiska Caafimaadka Uv
Uv Sterilizer Hawada
Isbitaalka Bakteeriyada Uv
Robotka Jeermiska Uvc
Uvc Light Isbitaalka Bacriminta
Uvc Robot Jeermiska
Ubc Robot-ka dhalmada
Xenon Jeermiska Deegaanka
Cirridka Sare ee Cirifka Sare UV Laydhka AirH-B100
UV Sare Flat Cirradiation Hawo Jeermiska Hawo -...
Ultrasonic baarista jeermiska jirka PBD-S1
Mashiinka qulqulaya laminarka hawada ee AirH-Y4000H
Mashiinka Nadiifiya Hawada Hawada ee AirH-Y1000H
AI Germ-dilka Robots AIStrike